Njengokupakisha okuvamile kwezokwelapha, ukupakisha kweblister kusetshenziswa kabanzi kuzo zonke izinhlobo zokupakisha ezithaka imithi esizithatha nsuku zonke. Ngaphezu kwamaphilisi ejwayelekile enza imithi, amakhosombe, amaphilisi kanye neminye imikhiqizo yezemithi, ibuye isetshenziswe kakhulu ekudleni, ezimonyweni, nasemathoyizi. Izipho, ukufakwa kwezingxenye zomshini nezikagesi, kunezinzuzo zokusebenziseka kalula, okusobala futhi okunembile, isisindo esilula njalonjalo.
Izinto zalo eziyinhloko uhlobo lwe-resin ebizwa nge-pvc. Isici sayo esiyinhloko ubunzima obuhle, i-gloss kanye nokubonakala. Abasebenzisi abaningi bacabanga ukuthi iphakethe elihle kakhulu. Kepha uma sihlola ukusebenza kwesithiyo sodwa, sizothola ukuthi amaqiniso awahle ngendlela obekucatshangwa ngayo.
Uma umkhiqizo othile wezokwelapha uzwela ngokweqile kumoya womoya-mpilo namanzi, kusobala ukuthi lolu hlobo lomuthi alulungele ukupakishwa okufana ne-PVC, ngakho-ke sizobona izinkampani eziningi zemithi ziqala ukufaka ungqimba lwe-aluminium ngaphandle kwephakethe . Kodwa-ke, empeleni, ngoba indawo yokupakisha yomuthi akuyona indawo yokuphefumula, isikhwama se-aluminium sisagcwele umoya, esizokwakha umphumela wokungena, futhi umuthi osephaketheni le-blister usazokwakhiwa i-oxygen. Kulolu hlobo lwenqubo, indlela engcono kakhulu yokwengeza ingaphandle Iphakheji ligcwele i-nitrogen. Njengoba i-nitrogen inomphumela wokubhafa nowokufuduka, izonciphisa kakhulu ithonya le-oxygen kusampula ku-blister. Kodwa-ke, abenzi bemithi abaningi abakuqapheli futhi bakwenza lokhu.
Bese kuthi indlela ebiza kakhulu yokuvikela izidakamizwa nayo ivele emakethe yilokho okubizwa ngokuthi yi-double-aluminium packaging, okubizwa ngokuthi yi-double-aluminium package, njengoba igama liphakamisa, ukusebenzisa ifilimu elihlanganisiwe le-aluminium-plastic esikhundleni sephepha eliqinile le-PVC ibhamuza, bese usebenzisa izakhiwo zesithiyo ezisezingeni eliphakeme esikhwameni sangaphandle. Ukupakisha kwe-aluminium-plastic kungavimba amanzi ne-oxygen futhi kungadlala indima ekuvimbeleni ukukhanya. Kodwa-ke, ngesizathu esifanayo, uma inqubo yokupakisha ingenziwa endaweni ye-buffer, ukupakisha kusazoqhubeka kube ne-21% oxygen, ezosebenza ngemithi ebucayi futhi ibangele ukuthi umuthi wehle.